Travel World: July 2012
ရွှေတိဂုံ စေတီတော်အား ၂ဝ၁၃ တွင် ရွှေသင်္ကန်း ကပ်လှူ ပူဇော်မည်
via သတင်း by lat@mizzima.com (ရတနာဦး) on 7/31/12
ရွှေတိဂုံ စေတီတော်အား လာမည့် ၂ဝ၁၃ ခုနှစ်တွင် ရွှေသင်္ကန်း ကပ်လှူ ပူဇော်မှု ပြုလုပ်မည် ဖြစ်ကြောင်း စေတီတော်
ဂေါပကအဖွဲ့မှ တာဝန်ရှိသူ တဦးက ...
ရန်ကုန် (မဇ္ဈိမ) ။ ။ ရွှေတိဂုံ စေတီတော်အား လာမည့် ၂ဝ၁၃ ခုနှစ်တွင် ရွှေသင်္ကန်း ကပ်လှူ ပူဇော်မှု ပြုလုပ်မည်
ဖြစ်ကြောင်း စေတီတော် ဂေါပကအဖွဲ့မှ တာဝန်ရှိသူ တဦးက ပြောသည်။
ငါးနှစ်လျှင် တကြိမ် ပုံမှန်ပြုလုပ်လေ့ရှိသည့် ရွှေသင်္ကန်း ကပ်လှူ ပူဇော်နိုင်ရန်အတွက် ငြမ်းထိုး ပြင်ဆင်မှုကို ယခုနှစ် အောက်တိုဘာလတွင် စတင်ပြုလုပ်မည် ဖြစ်သည်။
ရွှေတိဂုံ စေတီတော်ကြီးတွင် ရွှေသင်္ကန်း ကပ်လှူထားမှုများ ရှိနေသေးသည့်အတွက် နောင်တော်ကြီးစေတီနှင့် အထက်ပစ္စယံရှိ စေတီ ၆၈ ဆူကိုသာ ရွှေသင်္ကန်း ကပ်လှူရန် စီစဉ်ထားပြီး ငွေကျပ်သိန်းပေါင်း တသောင်း သုံးထောင်ကျော် နှင့် တလက်မ ပတ်လည် ရွှေရာဆိုင်း (တလက်မ ပတ်လည် အရွယ်ရှိ ရွှေမျက်ပါး အရွက်တရာ) သုံးသောင်းကျော် အကုန်ကျခံ အသုံးပြုရန် စီစဉ်ထားကြောင်း ဂေါပကအဖွဲ့မှ ရုံးအဖွဲ့မှူး ဦးဝင်းကြိုင် က ပြောသည်။
ကုန်ကျစရိတ်များကို အလှူရှင်များ လှူဒါန်းသည့် အလှူငွေမှ ထုတ်ယူ အသုံးပြုမည် ဖြစ်သည်။
ရွှေသင်္ကန်းကပ်လှူမှုကို ၂ဝ၁၃ ခုနှစ်၊ မြန်မာ နှစ်ဆန်း တရက်နေ့တွင် အပြီး ကပ်လှူမည် ဖြစ်ကာ နောင်တော်ကြီး
စေတီတော်နှင့် စေတီအရံ ၂၄ ဆူအား ရွှေဆိုင်းပေါင်း ၁၄,၆၅၁ ဆိုင်းနှင့် အထက်ပစ္စယံရှိ စေတီရံများအား
ရွှေဆိုင်းပေါင်း ၁၆,၇၅၀ ကပ်လှူမည် ဖြစ်သည်။
အထက်ပစ္စယံရှိ မုခ်ဦး လေးဆူအား ရွှေသင်္ကန်းကပ်လှူသည့်အခါ ရာသီဥတုဘေး အန္တရာယ် ခံနိုင်ရန်အတွက်
အောက်ခြေမှတဆင့် ကြေးဘောင်ကြေးပြား ကပ်ပြီးမှသာ ရွှေမျက်ပါး ကပ်လှူမည် ဖြစ်သည်။
Two new domestics airlines...
Heard two new domestic airlines will be launched soon...Anyone can share some info???
To view this discussion on the web visit https://groups.google.com/d/msg/travelmyanmar/-/dQ7gZikEpI8J.
Posted by Travel at 11:51 PM0comments
"အစိုးရက ပြောနေသလို ဒီမိုကရေစီနည်းကျ ဖွင့်ပေးလာမယ်ဆိုရင် နေရာတိုင်းမှာ တံခါးတွေ ပွင့်လာမယ် ဆိုတာကတော့ ရှင်းပါတယ်။ သဘောကတော့ မထိန်းနိုင်သေးဘဲ ဖြစ်နေတဲ့ လက်ရှိ အခြေအနေတွေ ဟာလည်း ပိုပြီး လျော့ရဲရဲ ဖြစ်လာနိုင်တာပါ။ လူတွေက လုပ်ချင်တာ လုပ်လာနိုင်တဲ့ သဘောပါ။ ဥပဒေနဲ့ ညီတာရော၊ မညီတာရော အကုန်ဖြစ်လာနိုင်ပါတယ်။"
"မြန်မာနိုင်ငံလို တိုင်းပြည်မျိုးတွေမှာ ကိုယ့်ရဲ့နယ်စပ်ဒေသမှာ ဘာတွေ ဖြစ်ပျက်နေတယ်၊ လူထုက ဘာတွေ ရင်ဆိုင်နေရတယ် ဆိုတာတွေကို အသေအချာကြည့်ပြီး လိုအပ်သလို တုံ့ပြန်ဆောင်ရွက်နိုင်ဖို့ ကြိုးပမ်း လာတာတွေကို တွေ့ရပါတယ်။"
"ဒီကိစ္စနဲ့ ပတ်သက်လို့ ကိုင်တွယ်လာတာတွေ၊ ပွင့်ပွင့်လင်းလင်း ဆွဲထုတ်ပြီး၊ မြင်သာထင်သာဖြစ်အောင် လုပ်လာတာတွေကို ကြည့်မယ် ဆိုရင်ပဲ အပြောင်းအလဲတွေဟာ အံ့သြလောက်စရာပါ။ အကြီးမား ဆုံး ပြဿနာလို့ ကျနော် ယူဆတာကတော့ လူတွေက သူတို့ တွေ့မြင်နေရတဲ့ ကိစ္စက ဘာမှန်းမသိဘဲ ဖြစ်နေကြတာပါ၊ ဒါက သာမန် ဖြစ်ရိုးဖြစ်စဉ် ကိစ္စ၊ တလျှောက်လုံး လုပ်လာတဲ့ ကိစ္စပဲလို့ မြင်ကောင်းမြင်ကြတဲ့ ကိစ္စပါ။"
"သဘာဝ အရင်းအမြစ်တွေမှာ အကြီးအကျယ် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံကြတဲ့ တိုင်းပြည်တွေဟာ လူ့အရင်းအမြစ်တွေ မှာ စိုက်ထုတ်မှုတွေ နည်းပါးတဲ့ ပုံစံမျိုး တွေ့ရတတ်ပါတယ်။ အတွေ့အကြုံတွေအရ ပြောရမယ် ဆိုရင်တော့ လူ့အရင်းအမြစ်အတွက် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုတွေက ရေရှည်မှာ ပြန်ပြီး အကျိုး ခံစားရတတ်ပါတယ်။"
"ဒါက စီးပွားရေး သက်သက် မဟုတ်ပါဘူး၊ ပွင့်လင်းပြီး ထင်သာမြင်သာရှိရှိနဲ့ တာဝန်သိတဲ့ စီးပွားရေး ပုံစံမှာ အတူလက်တွဲ လုပ်ဆောင်ခြင်းအားဖြင့် တိုင်းပြည် တည်ငြိမ်မှုအတွက် အထောက်အကူ ဖြစ်ပါလိမ့်မယ်။"
ကိုအောင်လွင်ဦး (ဗွီအိုအေ မြန်မာဌာန)
Beating around the bush! Really tired of it and wonder how much longer we will have to put up with this kind of stuff!
2012/8/1 chawchaw mirror <chawchawmirror@gmail.com>
(((မိန်းမရေ .. အထက်က မှာ လိုက်တယ် ၊ ဒီနေ့ .. ထမင်း စားစရာ မလိုဘူးတဲ့)))
စာပေကင်ပေတိုင်မှူးတင့်ဆွေမှ ပြည်တွင်းသတင်းဂျာနယ်များအား ယနေ့(ဇူလိုင်
၃၁ရက်) နေ့တွင် ခေါ်ယူသတိပေး ပြောကြားခဲ့ပြီး အထက်ကခိုင်းလို့လုပ်ရတာပါဟု
(The Myanmar Post News Journal)
ယင်းအပြင် ထုတ်ဝေခွင့် အကန့်အသတ်မရှိရပ်ဆိုင်းခံရသော The voice weekly
သတင်းဂျာနယ်နှင့် Envoy သတင်းဂျာနယ်များ
မလုပ်ချင်ဘူး၊အထက်ကအဆင့် ဆင့် ညွှန်ကြားချက်ကြောင့် လုပ်ရတာပါ´ဟု
On 7/28/12, Ko Nyi Nyi <nyi123@gmail.com> wrote:
> ဟိုတယ်ခရီးဝန်ကြီး ဗိုလ်ချုပ်အေးမြင့်ကြူနှင့် ပြောင်းလဲမည်ဟူသောသတင်း။
> Sedona ဟိုတယ် GM ကို ဗီဇာသက်တမ်းတိုးခွင့်ပိတ်လိုက်သည်ဟူသော သတင်းများပျံ့နှ့
> သိသူများ confirm.လုပ်ပေးတော်မူကြပါကုန်။
Re: RE : URGENT
May i suggest to Hotel and tourism department to open the tourism
school to get the licence to beatour guide.
Education department -. Under the guidance of the lower part of Myanmar
Under the guidance of the lowre
Like that . We should do.
Should understand upon them.
They live in Myanmar.They are our citizen.Why did you seperate with
them.They have their own ability to be an excellent guide. In
Mandalay have too many books .They can read the books whatever they
Why are you angry too much??????
Let's be GOOD MIND EACH OTHER. CHECK your mind and purify!!!!!!
DAW MOE MOE AYE ( E,S,I,RUssian)Guide
On 7/23/12, tommeaung@gmail.com <tommeaung@gmail.com> wrote:
>့ ရန်ကုန်မန်းလေး ဘယ်မှာပဲဖြစ်ဖြစ်၊ ရင်းနှီး မှု တော.ပြုရမှာပါ။
> ဖြစ်ချင်တဲ.စိတ် ပြင်းပျ ဖို.ပဲလိုတယ်။ အောက်ကကဗျာလေးလိုပါ။
> အရွေ.(aChange )
> # အလှည်.အပြောင်း
> # လူတိုင်းကောင်းချင်
> # အားအင်ရှိဖို. လိုလိမ်.မယ်။
> Glossary: အားအင်= Expenditure, Time, Enthusiasm, Exertion, Direction or
> Goal, and Concentration with Tolerance
> သွးသစ်( လမ်းပြ )
> On Sunday, July 22, 2012 12:08:02 AM UTC+6:30, Bo Saw wrote:
>> နယ်ကနေပြီး ငွေကြေးအခက်အခဲကြောင့် ရန်ကုန်ကိုလာမတက်နိုင်တဲ့သူတွေ
>> ရန်ကုန်ကို လာတက်ရတယ်ဆိုတာ က အကုန်အကျက နည်းတာမဟုတ်ပါဘူး။နယ်မှာ
>> ဖွင့်ပေးနိုင်ရင် အရမ်းကောင်းပါတယ်။
>> ရန်ကုန်ကထွက်တိုင်း တော်လာမှာမဟုတ်သလို နယ်ကဆိုတိုင်းလည်း
>> On Thursday, July 5, 2012 10:20:52 AM UTC+6:30, kyawth mu wrote:
>>> *အကြောင်းအရာ။ ။
>>> မြန်မာနိုင်ငံဟိုတယ်နှင့်ခရီးသွားလာရေးလုပ်ငန်းဝန်ကြီးဌာန မှ ဒေသဆိုင်ရာ
>>> ဧည့်လမ်းညွှန်အခြေခံသင်တန်း(ရက်တိုသင်တန်း) လာရောက်ဖွင့်လှစ်မည့်
>>> စီစစ်ပေးပါရန် တင်ခြင်း နှင့် MTGA (မန*္တ*လေးဇုံ**) အသင်းမှ ဖွင့်လှစ်
>>> လျက်ရှိသော ၁/၂၀၁၂ သင်တန်း မှ သင်တန်းသူ/သား များအား အဆိုပါ ရက်တို သင်တန်း
>>> နှင့်ပေါင်းကူး ချိတ်ဆက် ပေးမည့် အစီအစဉ် အားကန်.ကွက်ခြင်း*
>>> *"မြန်မာနိုင်ငံဟိုတယ်နှင့်ခရီးသွားလာရေးလုပ်ငန်းဝန်ကြီးဌာန မှ
>>> ဒေသဆိုင်ရာဧည့်လမ်းညွှန် အခြေခံသင်တန်း (ရက်တိုသင်တန်း)လာရောက်ဖွင့်လှစ်မည့်
>>> အစီအစဉ်အားပြန်လည် စီစစ်ပေးပါရန် တင်ခြင်း''*
>>> အထက်ပါအကြောင်းအရာ နှင့်ပတ်သက်၍ ဆွေးနွေးလိုသည်မှာ မြန်မာနိုင်ငံ ဟိုတယ်
>>> နှင့်ခရီသွားလာ ရေး သင်တန်းကျောင်းမှ နှစ်စဉ် ဧည့်လမ်းညွှန်
>>> အသစ်များမွေးထုတ်ပေးလျက်ရှိရာ ယခုအခါ ဧည့်လမ်းညွှန် လိုင်စင်နံပါတ် ၇၀၀၀
>>> ကျော်ရှိပါသည်။ ဧည်.လမ်းညွှန် လိုင်စင် ၄၀၀၀ကျော် ပယ်ဖျက်
>>> လိုက်ပြီးဖြစ်သဖြင့် ဧည့်လမ်းညွှန် လိုင်စင် ၃၀၀၀ကျော်မှာ
>>> လိုင်စင်အသက်ဝင်လျက်ရှိပါသည်။ သို.သော်အကြောင်းကြောင်းကြောင့်
>>> ဧည့်လမ်းညွှန်အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းမှုကို လုပ်ကိုင်လျက်ရှိသော ဧည့်လမ်းညွှန်
>>> ၁၀၀၀ ၀န်းကျင်သာရှိပါသည်။(ဥပမာ- ဧည့်လမ်းညွှန် အသက်မွေး ၀မ်းကျောင်းမှုသည်
>>> အသက်ရှင်ရပ်တည်မှု အတွက်မလုံလောက် ၍သော်လည်းကောင်း)
>>> * ယခု လက်ရှိဟိုတယ်နှင့် ခရီသွားလာရေးသင်တန်းကျောင်း(ရန်ကုန်) ၌
>>> ဖွင့်လှစ်လျက်ရှိသည့် ဧည့်လမ်းညွှန် အခြေခံ သင်တန်း အမှတ်စဉ် (၁/ ၂၀၁၂) တွင်
>>> ပညာသင်ကြားလျက်ရှိသောကျောင်းသား/သူများတွင်လည်း မန္တလေးဇုံ ၊
>>> တောင်ကြီးအင်းလေးဇုံ ၊ ပုဂံဇုံ စသည့် ဒေသ များမှ သင်တန်းသူသင်တန်းသားများသည်
>>> အချိန်အား၊ လူအား၊ ငွေအား စိုက်ထုတ် ကာ သင်တန်းပြီး ၍
>>> ဧည့်လမ်းညွှန်လိုင်စင်ရလျှင် မိမိ နှင့် အတူတူ ဖြေဆို ပြီး
>>> အရည်အချင်းမပြည့်မှီသေး ၍ အောင်မြင်ခဲ့ခြင်းမရှိသောသူများနှင့်အတူတူ guide
>>> * ဧည့်လမ်းညွှန်လိုင်စင် ရ ရှိရန်အတွက်စစ်ဆေးခံရာတွင် အရည်အချင်းပြည့်မှီသော
>>> မေးခွန်းပုံစံဖြစ်ပြီး အောင်ရန်ခက်ခဲခြင်း (ယခုစာမေးပွဲတွင် လူ ၇၀၀ကျော်ဖြေ၍
>>> လူ၁၀၀ ကျော်သာတက်ရောက်ခွင့်ရရှိခြင်း)
>>> * သင်တန်းတွင်လည်း လက်ရှိ ၀န်ကြီးဌာန မှ ဆရာကြီး/ဆရာမကြီး များ ၊
>>> သက်ဆိုင်ရာနယ်ပယ်အသီးသီးမှ အငြိမ်းစား ဆရာကြီး/ဆရာမကြီး များ ၊ professor
>>> ကြီးများ ၊ လက်ရှိလုပ်ကိုင်လျက်ရှိသောဝန်ကြီးဌာန မှ လူကြီးများ စသည့်
>>> သက်ဆိုင်ရာနယ်ပယ်အသီးသီးမှ ကျွမ်းကျင်ပညာရှင်များမှ သင် ကြားပေးလျက်ရှိခြင်း
>>> * နေ.စဉ်အတန်းတွင် Presentation (ဧည့်လမ်းညွှန် တစ်ဦးကဲ့သို.
>>> ဧည့်သည်ကိုရှင်းလင်းတင်ပြခြင်း) ပြုလုပ်ရခြင်း
>>> * သင်တန်းကာလ ပြီးဆုံးလျှင် သင်တန်းမှ Certificate ပေးရန် အရည်အချင်းစစ်
>>> စာမေးပွဲ စစ်ဆေး ၍ဆုံးဖြတ်ခြင်း
>>> * ကျောင်းအုပ်ကြီးမှ ဦးဆောင် ၍သင်တန်းမှ စည်းကမ်းကြပ်မတ်စွာ ကိုင်တွယ်
>>> ခြင်း (ဥပမာ- ၇၅ %ပြည့်မှီ မှ စာမေးပွဲဖြေဆိုခွင့်ရရှိခြင်း ၊ ၁၅
>>> မိနစ်ကျော်လျင် သင်တန်းတံခါး ပိတ်ခြင်း)
>>> * ထိုနောက် Certificate ရရှိလျင် Licence ထုတ်ယူ၍ ရရှိမည် မဟုတ်ပဲ
>>> အချိန်အတိုင်းအတာတစ်ခု စောင့် ၍ Oral Test ကို ဖြေဆို ရ ခြင်း
>>> * Oral Test တွင်လည်း Third Party (အကျိုးခံစားခွင့်ရှိသူများနှင့်
>>> မပတ်သတ်သောသူ ၊ သမာသမတ်ရှိသော ၊ အတွေ.အကြုံရှိသောပုဂ္ဂိုလ်) မှ
>>> သို.ဖြစ်ပါ ၍ ဧည့်လမ်းညွှန်တစ်ယောက်ဖြစ်ဖို.ရန်အတွက် အချိန်အား(Form (ပုံစံ)
>>> ဖြည့်သည့်အချိန်မှ စတင် ၍လိုင်စင်ရသည် အထိ ၁ နှစ်မှ ၁ နှစ်ခွဲအထိ
>>> အချိန်ကြာမြှင့်ခြင်း) ၊ လူအား (ဘာသာစကားကျွမ်းကျင်မှု နှင့်
>>> အထွေထွေဗဟုသုတပြည့်စုံမှု) ၊ ငွေအား စသည်ဖြင့်ရင်းနှီးမြုပ်နှံရခြင်း
>>> တို.အပြင် စိတ်ရှည်သီးခံမှု ၊ ဇွဲသန်မှု ၊
>>> ဧည့်လမ်းညွှန်လုပ်ငန်းကိုမြတ်နိုးတန်ဖိုးထားမှု မည်မျှရှိသနည်းဆိုသည်ကို
>>> အချိန်နှင့် ပတ်ဝန်းကျင် သဘာဝ တရားမှလည်း စာမေးပွဲ စစ်ဆေးလျက်ရှိပါသည်။
>>> ထို.အပြင် လုပ်ငန်းခွင်တွင်လည်း ဘာသာစကားမကျွမ်းကျင် ၍လည်းကောင်း ၊ ခရီးစဉ်
>>> မကျွမ်းကျင် ၍ လည်းကောင်း ၊ စိတ်ရှည်သီးခံမှု မရှိ ၍လည်းကောင်း ဧည့်သည်မှ
>>> complaint (မကျေနပ်မှုကို တင်ပြခြင်း) ပြုလုပ်
>>> တခါတရံကြားသိရပါသည်။ သို.ဖြစ်ပါ ၍၀န်ကြီးဌါန မှ
>>> လက်ရှိစီစဉ်ဆောင်ရွက်လျက်ရှိသော ဟိုတယ် နှင့် ခရီးသွားလာရေးသင်တန်းကျောင်း
>>> သင်ကြားရေး လုပ်ငန်းစဉ်များမှာ ဧည့်လမ်းညွှန်တစ်ယောက်ဖြစ်ရန်လုံလောက်သော
>>> ၊ အထွေထွေဗဟုသုတပြည့်စုံမှု နှင့် သီးခံနိုင်စွမ်း တို.အပြင် သင်တန်းပြီးဆုံး
>>> ဧည့်လမ်းညွှန်လိုင်စင် လက်မှတ်
>>> ယခုအခါ ဧည့်လမ်းညွှန်အများစု ၏စိုးရိမ်မကင်းဖြစ်မိသည်မှာ Regional Guide
>>> Course (ရက်တိုသင်တန်း) ဖွင့်လှစ်မည့်အစီအစဉ်ကြားသိရပါသဖြင့်နိုင်ငံ
>>> ခေါ်ဆိုထိုက်သော ဧည့်လမ်းညွှန် ၁ ယောက်ဖြစ်ဖို.ရန် အတွက်
>>> တိုတောင်းသောအချိန်ကာလဖြင့် ဖွင့်လှစ်မည့် အစီအစဉ်ကို
>>> သင်တန်း နှင့်ပေါင်းကူး ချိတ်ဆက် ပေးမည့် အစီအစဉ် အားကန်.ကွက်ခြင်း"*
>>> အထက်ပါအကြောင်းအရာ နှင့် ပတ်သက်၍ ၁၅/၆/၂၀၁၂ ရက်နေ.တွင်
>>> တာဝန်သိဧည့်လမ်းညွှန် တစ်ဦးမှ လည်း MTGA(မန္တလေးဇုံ)
>>> အသင်းမှဖွင့်လှစ်လျက်ရှိသော ၁/၂၀၁၂သင်တန်း ၏ အားနည်းချက်၊ လိုအပ်ချက်
>>> များကို ဝေဖန်ထောက်ပြခဲ့ပြီးဖြစ်ပါသည်။ အဆိုပါ တာဝန်သိဧည့်လမ်းညွှန် ၁ဦး ၏
>>> MTGA(မန္တလေးဇုံ) အသင်းမှဖွင့်လှစ်လျက်ရှိသော ၁/၂၀၁၂သင်တန်း သည်…
>>> * မြန်မာနိုင်ငံ ဟိုတယ်နှင့်ခရီးသွားလာရေး ၀န်ကြီးဌာန ၏
>>> ခွင့်ပြုချက်ဖြင့်ဖွင့်လှစ်ခဲ့သောသင်တန်း မဟုတ်ခဲ့ခြင်း
>>> * သင်တန်း ၏ ၀င်ခွင့်စာမေးပွဲ မေးခွန်း သည် အရည်အချင်းပြည့်မှီသော စာမေးပွဲ
>>> * Third Party (အကျိုးခံစားခွင့်ရှိသူများနှင့် မပတ်သတ်သောသူ ၊
>>> သမာသမတ်ရှိသော ၊ အတွေ.အကြုံရှိသောပုဂ္ဂိုလ်) များသည် ၄င်းစာမေးပွဲ
>>> ၏Interviewer (လူတွေ.စစ်ဆေးမေးမြန်းသူ အဖြစ်(လုံးဝ)မပါ ၀င်ခြင်း)
>>> စသည့် အချက်များကြောင့်MTGA(မန္တလေးဇုံ)အသင်းမှ ဖွင့်လှစ်လျက်ရှိသော
>>> ၁/၂၀၁၂သင်တန်းမှ သင်တန်းသူ/သားများသည် နိုင်ငံ သံတမန်ဟု တင်စားခေါ်ဝေါ်ကြသော
>>> နိုင်ငံ့ ဂုဏ်ဆောင် ဧည့်လမ်းညွှန်များ အဖြစ် အရည်အသွေးမပြည့်မှီ နိုင်သည်ဟု
>>> ယူဆပါသော ကြောင့်…
>>> MTGA(မန္တလေးဇုံ)အသင်းမှ ဖွင့်လှစ်လျက်ရှိသော ၁/၂၀၁၂သင်တန်း မှ
>>> သင်တန်းသူ/သားများအား အဆိုပါ ရက်တို သင်တန်းနှင့်ပေါင်းကူး
>>> ချိတ်ဆက်မည့်အစီအစဉ် အား ပူးတွဲပါ စာရင်းတွင် ပါဝင်ကြသည့် မန္တလေးမြို.ရှိ
>>> လိုင်စင်ရဧည့်လမ်းညွှန်များမှ ချွင်းချက်မရှိ ကန်.ကွက်ကြောင်းတင်ပြ အပ်ပါသည်။
>>> ၁။ ဦး ထွန်းထွန်းကို ၂။ ဦး စိုင်းမွန်းစိန် ၃။ ဦး စည်သူဝင်း
>>> ၄။ ဦး အောင်နိုင်ဦး ၅။ ဒေါ် ၀င်းမီမီခင်
>>> ၆။ ဒေါ် နန်းစမ် မွန်း ၇။ ဦး အောင်ကိုကိုဝင်း ၈။ ဦး ချစ်စမ်းဦး
>>> ၉။ ဦး နေမျိုးကို
>>> ၁၀။ ဦး အောင်သူဝင်း ၁၁။ ဦး သန်းထိုက် ၁၂။ ဦး အောင်ကိုမြတ် ၁၃။ ဦး
>>> စိုးမိုးနိုင် ၁၄။ ဦး ဇင်မင်းကျော်
>>> ၁၅။ ဦး ကျော်လွင် ၁၆။ ဦး တင်ကိုကို ၁၇။ ဦး စိုင်းအောင် ၁၈။ ဦး
Posted by Travel at 9:09 PM0comments
Posted by Travel at 8:23 PM0comments
Immediate Need: SAP SCM PP Consultant - PA
Kindly go through the below contract positions and respond back ASAP to eravi@spectrumlogix.com - 214 210 0529 with an updated word formatted resume along with the below required details foraquick interview process.
Any interviews/job offers in pipeline(Yes/No):
Best day time to Contact:
Best day time for interview schedules:
Title: SAP SCM PP Consultant
Duration: 1+ year (Extendable, Long Term Contract)
5 -6years of experience in SAP PP and QM areas.
The Candidate must have detailed understanding in SAP Make to Deploy area with Manufacturing Background
E Ravi | Lead Technical Recruiter |
5221N,O' Connor Blvd,|Suite 840 |
Irving, TX 75038 |
E-mail: eravi@spectrumlogix.com |
Direct: 214-210-0529 |
YIM: ravi.talentacquisition | GTalk: eravi.recruiter |
Posted by Travel at 3:28 PM0comments
Find the hot List of the day, send me the requirements to m1@crescensinc.com.
Name Skills Location Relocation Visa Status Exp
Brunda Business Analyst Phoenix, AZ CA H1B 7+
sekar Front End Developer (Gaming Neenah WI Yes EAD 6+
Susil Project Manager / Senior Business Analyst Charlotte, NC Yes H1B 9+
Kiran Business Objects Lead/ Architect / SAP BO OH Wisconsin & Ohio H1B 9+
Swathi QA Houston, TX Yes H1B 6+
Tati Tester - Manual & Automation Phoenix, AZ Yes H1B 11+
Tyro Oracle BPM & SOA Consultant NJ Yes H1B 14+
kiran Sr.Datastage Developer Wilmington – DE Yes H1B 6+
Sree SAP Techno-Functional Consultant Dallas, TX Yes H1B 10+
Venkat SQL Server Developer Nashville, TN Yes H1B 12+
Ph: 732 305 2858 Extn- 455.| Fax: 732 305 2861
Posted by Travel at 1:48 PM0comments
Informatica Developer in NYC, NY
NOTE: F2F Required after phone screen
This position requires background check before candidate start. You can refer to the NTT DATA standard background check form in the contract.
This candidate will be reporting toaDevelopment Team Lead. We are lookingacandidate with the following skills:
· Proficient in Informatica PowerCenter (Version 8.6 or later)
· Proficient in integration technologies, like publish-subscribe models
· Minimum3years experience in database schemas, tables and SQL queries
· Minimum3years experience in XML/XSL required
· Knowledge of UNIX Required
enta� L < : �� �� /span>
Documentum 6.7 - architecture & Implementation
Documentum DFS architecture & implementation
Documentum DFC architecture & implementation
Documentum high availability architecture & implementation
Documentum disaster recovery architecture & implementation
Posted by Travel at 12:52 PM0comments
Documentum Architect in NYC, NY
F2F Required after successful phone interview with NTT DATA.
This resource will be responsible for
1. Providing architectural guidelines, best practices for implementation of Documentum Software.
2. Installation and support of DCTM 6.7 platform and extensions in all the application environments
3. Configure high availability in production and staging environments
4. Configure Disaster Recovery
5. Documentation of the architecture, implementation details, deployment plan and configuration plan to account for
high availability, manageability, security and disaster recovery of all DCTM software components.
6. Support team in infrastructure, development, test, documentation related activities as needed.
Required Qualifications (NTT DATA Standard List):
Document Management - Documentum
Documentum 6.5 - architecture & Implementation
Posted by Travel at 12:51 PM0comments
Required: Websphere Portal Developer at Maumee, OH
- 5+ years experience with programming, automating, deploying, and supporting production WebSphere Portal & WCM.
- Experience with WebSphere family of products, Portlet Factory, Java development, REST API services and other application server technologies.
- Knowledge of deploying portlets and other J2EE applications.
- Understanding and knowledge of the WebSphere Application Server, IBM Directory Server, IBM Tivoli Directory Integrator, OmniFind Search, Quickr and Sametime.
Posted by Travel at 11:51 AM0comments
Job Title: Jr SAP ABAP Developer Needed at MO for $45/hr
Job Title: Jr SAP ABAP Developer
Develop/maintain application code that adheres to coding standards and best practices.
Perform technical analysis and design that is derived from supplied functional specifications.
Frequently collaborates with Business Analysts and Technical Leads.
3 years of experience in SAP ABAP Programming.
Expertise in Output documents and ALV reporting required.
Adobe PDF reportingaplus.
Must be very results-oriented, self-sufficient and agile.
Required: Fatwire Consultant at Piscataway, NJ
For immediate conisderations please send profiles to wajee@exatechinc.com
Position: Fatwire Developer
- Fatwire application architecture
- Planning and configuring infrastructure to support Fatwire
- Configuration and administration of Fatwire Products : Content Server, Engage, Satellite Server, Community Server, Mobility Server Gadget Server, …
- Site topology and content organization
- Asset model design for both Basic and Flex Assets
- Page & Template Design
Re: FDI/JV hotels'contract for until March 2013
ှုI would like to know the current situation between hotels and agents.
Those posts are important for Tourism Industry .
FDI hotels and MOHT
Travel Agents and FDI hotels
MOHT and Travel Agents
On 7/29/12, Rain Man <tourswithmoe@gmail.com> wrote:
> Well, even though I am not directly concerned with those posts. I have no
> objection as they do not bother me at all.
> On Sun, Jul 29, 2012 at 12:41 PM, <xlamoine@gmail.com> wrote:
>> Dear Admin,
>> Please let me share you my opinion about one thing. Please advise members
>> to send relevant posts to this site, regarding currently discussed issue
>> hotels' contracts under Ministry's imposed rate. If they have to discuss
>> with someone for their personal interest and/or own business, please
>> them to exchange mails outside of this forum.
>> Thank you for your kind monitoring.
>> On Sunday, July 29, 2012 10:14:20 AM UTC+6:30, (unknown) wrote:
>>> Dear Ma Sandar, Ma Sabei & All Friends,
>>> Thank you for your mail regarding hotels FDI/JV!
>>> We, Seven Diamond Express face the same as below. Especially, the
>>> Governor's residence never been contract with us in the past two years.
>>> In Traders, they do not confirm DELUXE ROOM starting end of this month
>>> arrival tour Jul 31 '12, so we proposed to stay at TRADERS CLUB which is
>>> confirmed by Traders! Traders gave us the reason that Deluxe rooms are
>>> under renovation end of this Year from now. Please advise whether this
>>> event is correct or not, our all friends in tourism industry!!!
>>> For our next client, she do want to get DELUXE which is her budget, but
>>> we can confirm TRADERS CLUB, so she refused our proposal for TRADERS
>>> CLUB!!! We do not want to give this client up due to above mentioned
>>> matter, dare all!!!
>>> Seven Diamond Express Travels Team
>>> SEVEN DIAMOND EXPRESS TRAVELS CO., LTD.
>>> No.99,G/F,Corner of U Wi Zar Ya & Damazedi Road (infront of CB Bank),
>>> Ph: (95-1)500712, 500719, 500567, 500182, 500215.
>>> Email: sdmtravels@myanmar.com.mm , sdm.marketing2009@gmail.com
>>> URL: www.sevendiamondtravels.com
>>> Our commitment is to respond any enquiry within 24 hours. If you are not
>>> replied to during the given period of time then it's possible that the
>>> might lost somewhere along the way. Therefore we would appreciate your
>>> From: "Nice Vacation Tourism Co.,Ltd." <nicevacation@myanmar.com.mm>
>>> To: "Nature Dream Travel" <office@naturedreamtravel.com>**, "UMTA" <
>>> Subject: FDI/JV hotels'contract for until March 2013
>>> Dear Ma Sabei and All Travel Agents,
>>> Following is the status of Hotels' contracts from us
>>> 1) The Strand Hotel – already gotalong ago and never been revised.
>>> 2) The Governor's residence – contract not given. If we need to make
>>> reservation will offer rate it is based on commission. Not contract.
>>> ** We think that not for all agents.
>>> 3) Savoy : contract not given this year.
>>> 4) Thamada / Inya Lake – Supposed to get soon.
>>> 5) Chatrium – supposed to get soon.
>>> 6) Park Royal – supposed to get soon.
>>> 7) Kandawggyi Palace Hotel – haven't heard from them yet.
>>> 8) Trader – already got it.
>>> 9) Summit Park View – Already gotalong ago and never been revised.
>>> 10) Sedona – supposed to get soon.
The Voice weekly နဲ့ Envoy Journal ၂စောင် ထုတ်ဝေခွင့်ပိတ်လိုက်တယ်။
Hot News ကို ပြင်းထန်စွာသတိပေးလိုက်တယ်။.တဲ့
> The question is will it bring about any real/ measurable/ meaningful
> 2012/7/29 Threis Eleiter <threiseleiter@gmail.com>
>> About U Aye Myint Kyu was written in The Voice of this week issued. I know
>> nothing about Sedona
>> Ko Thi Ha
>> 2012/7/28 Ko Nyi Nyi <nyi123@gmail.com>
>>> ဟိုတယ်ခရီးဝန်ကြီး ဗိုလ်ချုပ်အေးမြင့်ကြူနှင့် ပြောင်းလဲမည်ဟူသောသတင်း။
>>> Sedona ဟိုတယ် GM ကို ဗီဇာသက်တမ်းတိုးခွင့်ပိတ်လိုက်သည်ဟူသော
>>> သတင်းများပျံ့နှ့ နေပါသည်။
>>> သိသူများ confirm.လုပ်ပေးတော်မူကြပါကုန်။
SQL Database & Reporting Developer (SSRS) in Birmingham, AL